Ukulunywa kwenkinga - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke
Inkinga ukulunywaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-04-12T13:17:50+02:00
Ukulunywa kuyinkinga enkulu yeziguli ezine-urticaria. Ukulunywa ikakhulukazi ebusuku kungaba nengcindezi enkulu, ngoba kuphazamisa ukulala, futhi kubonisa umkhawulo omkhulu wekhwalithi yempilo.
Ukulunywa kunzima kakhulu ezigulini ezihlushwa yilokho okuthiwa yi-urticaria factitia. Lapha ukunwaya nokuhlikihla isikhumba kuholela ekubonakaleni kwemisipha emisha nasekuqhubekeni kokulunywa. Ukucasuka okuncane kwesikhumba, isb ukugcotshwa kwesikhumba ungazi lutho lapho ulele kungadala ukuhlaselwa okunzima kokulunywa.
Ukukhishwa kwe-histamine kumangqamuzana omzimba kuholela ngqo ekulungeni.
Izinto eziningi zingabangela ukulunywa. Isici esivamile salezi zinto ukuthi bakhipha i-neurotransmitter histamine ezicutshini, ezibamba iqhaza elibalulekile ekuvuseleleni ukulunywa. Lokho okubizwa ngokuthi ama-mast cell amasosha omzimba akhipha ama-neurotransmitters athile (ikakhulukazi i-histamine). Cishe yonke i-histamine eyenzeka esikhumbeni igcinwa kulokho okubizwa ngokuthi ama-mast cell. Uma lawa maseli enziwe asebenza, okusho ukuthi lawa maseli adonswa yisikhuthazi, khona-ke lesi isignali yokuqala yokuvuvukala okwenziwe kwasendaweni noma okusakazeka kwesikhumba. Ngenxa yalokho, ama-capillaries ayavuleka, isikhumba siyavuvuka sibe bomvu futhi silume, bese kuba amasondo.
Kodwa-ke, i-histamine ibuye ivuselele imicu yezinzwa esikhunjeni, bese ikhipha izinto ezithile ezinciphisa ukulunywa (i-neuropeptides). Lawa ma-neuropeptides awabangeli ukulunywa kuphela kepha nawo enza kusebenze amangqamuzana amakhulu, ukuze kuqale umbuthano ononya, ophela kuphela lapho kungekho maseli amasha nezinzwa ezingenziwa zisebenze. Amaseli amangqamuzana atholakala kakhulu eduze ngokushesha kwemithambo yegazi nezinzwa. Ngakho-ke, ukuxhumana phakathi kwamaseli amangqamuzana, amaseli emithambo yegazi, kanye nefayibha yezinzwa kuhle kakhulu.
Ngemuva kokulunywa yizinambuzane noma ngemuva kokuthintana nezimbabazane, siwuzwa ngamandla amandla we-histamine. Ngaphezu kwezinto ezikhipha i-histamine engapheli, ubuthi bezinambuzane eziningi kanye nobuthi obukhiqizwa izitshalo ezincinza ukulunywa buqukethe i-histamine, engena esikhunjeni futhi iyicasule. Lesi sikhuthazi sidala ukuthi siklwebhe noma sikhuhle isikhumba futhi sivumele igazi eliningi ukuthi lifike kuleli qophelo, ngakho-ke izinto ezicasulayo zingasuswa ngokushesha.